Hawaasni Oromoo magaalaa Edmonton Gamoo Masjiida Ansaarii fi Wiirtuu islaamaatiif oolu bitan - NuuralHudaa
Hawaasni Oromoo magaalaa Edmonton Gamoo Masjiida Ansaarii fi Wiirtuu islaamaatiif oolu bitan
Hawaasni Oromoo biyya Kaanaadaa magaalaa Edmonton jiraatu akka beeksisanitti, Gamoo Masjiida Ansaarii fi Wiirtuu Islaamaatiif oolu, Doolaara miiliyoona lamaa fi kuma dhibba lamaan ($2,200,000) bitan.
Wiirtuun Masjiida Ansaar haaraya bitame kun kan hawaasichi duraan itti fayyadamaa ture dachaa hedduun kan caalu akka tahe Imaamni Masjiida Ansaar Sheikh Abdii Huseen fi Miseensonni Boordii Masjiidichaa beeksisan.
Gamoon guddaan bitame kun yeroo gabaabaa keessatti haala tajaajila hawaasa muslimaatiif oolutti deebifamee kan sirreeffamu yoo tahu, Masjiida, Madrasaa, Mana Kitaabaa Waraqaa fi Dijitaalii, Wiirtuu Odeeyfannoo fi Istuudiyoo, iddoo oolmaa daa’immanii, akkasumas Mana Janaazaa kan qabaatu tahuu ibsame.
Haaluma Kanaan hawaasni Muslimaa guutuu addunyaa keessa jiru, deeggarsa barbaachisaa hunda akka godhu gaafatanii jiru.
maashaalaa mashaallaa ulama’otaa keenyaa urjiwaan diini akkasumaa warootaa nural hundaa Rabbiin umrii keessaan nuuf haa dhereessuu Rabbiif jechaan isin jaladhaa Ana olitti Rabbi isin hajaatu keessattu oboleetti teennaa Fariyaa Adami hedduu sijaaladha qabsooftu diini fakkaattu sumayyaa hadhaa Ammar Rabbiin umrii tee nuuf haadheressu nutis shamarran muslimaa shamaraa akkaa tetii diini Rabbiitiif dhaabatu rabbi nuhaa taasisuu
mashaa Allah ya rabbi. garharii